တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အကောင်းမြင်ဖို့ရာ ...
Posted by မေဓာဝီ at 11:45 AM
ဦးဦးဖျားဖျားဖတ်သွားပါတယ် စဉ်းစားစရာလေးတွေ နဲ့ သိပ်ကောင်းပါတယ်
ယောနိသော မနသိကာရဆိုတာ “နားလည်မှုရှိခြင်း” … တဲ့ ဥပမာ လေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အင်း အခုထမင်းစားပြီး ကြက်ဆင်ကြီး ပြန်ကြည့်သွားသေးတယ်
ပန်းချီဆရာတွေလို ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ဖြစ်
အစ်မမေဓာဝီ... စာလာဖတ်ပါတယ်။ အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်လေး ဒီ့ထက် ပိုထားတတ်အောင် လှုံဆော်ပေးတဲ့ ပို့စ်လေးမို့ နှစ်သက်မိပါတယ်။
ဘာသာတရားရူဒေါင့်က ညွန်ပြတဲ့ အကောင်းမြင်မှုကတော့ ကောင်းပါတယ် မမေဓါဝီ။
ဒို့ကတော့ ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ မကောင်းတာကို မကောင်းဘူးပဲမြင်တယ်...ကောင်းတာကို ကောင်းတယ်လို့ မြင်တယ်...မကောင်းနေတာကြီးကို ကောင်းပါတယ်လို့ မမြင်နိုင်တာတော့ အမှန်...မြင်ပါတယ်ပြောတဲ့သူ ကတော့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်နေသလား..၊ အဂုင်္လိမာလကြီး လက်ညှိးတွေလိုက်ဖြတ်နေတာ ဆရာကျေးဇူးဆပ်တဲ့ လူတော်လေးလို့ ခုထိမမြင်မိတာ အမှန်ပဲ ဒေါ်လေးမေရေ့...နှင်းကျစကို လှပါတယ်မြင်တာကအပျိုပေါက်လှသွေးကြွယ်ချိန် လှတာက်ိုမြင်နေတာကို ဒါကို အပုပ်ကောင် ရုပ်ဆောင်နေတာပါလို့ ပြောရင် မကောင်းမြင်လို့ ပြောမလား..နှင်းကျပြီးနောက်ရက်တွေမှာ ဗွက်တွေပေါက်ပြီး..ညစ်ပတ် နေတာမြင်ရင် နှင်းကျတာကို လှတယ်ပြောနိုင်မလား...ဗွက်ကလေးတွေ သိတ်လှတယ်ပြောတဲ့သူရှိရင်တော့ ဒီလူ တနေရာရာမှာ မှားနေပြီ...
ခုတော့ အမြင်လေးတစ်ခု ထပ်ချပြချင်စိတ်ပေါ်လာလို့။
ကိုယ်ကတော့ ယောနိသောဆိုတာကို ဥပမာတွေအများကြီးနဲ့ တစ်နေရာရာမှာ ဖွင့်ဆိုဖူးခဲ့တယ်။
နားလည်မှုနဲ့ အကောင်းမြင်စိတ် တူ/မတူ သိပ်မတွေးမိ
ပေမယ့် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်လောင်းငယ်ငယ်က သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ရေအိုးလေးအကွဲ ဘေးလူတွေက ၀ိုင်းလှောင်ခဲ့တယ်..။ အဲဒီမှာ သူပြန်ပြောတဲ့ စကားလေး အရမ်းသဘောကျခဲ့တာ။..ဘာတဲ့..
အို...ဘာဖြစ်လဲ..အိုးကွဲတော့ ကရွတ်တောင် ရသေး..တဲ့..။ စသည်...စသည်...
တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားလုံးများကို မှတ်သားသွားပါတယ် မကြီးရေ....
ဘကျောက်ပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ကောင်းတာကို ကောင်းတယ် မြင်ပြီး မကောင်းတာကို မကောင်းမြင်ရမှာပါပဲ။ အဲဒါကို မြတ်စွာဘုရားက သမ္မာဒိဋ္ဌိ - အမှန်မြင်ခြင်းလို့ ဟောခဲ့တာပဲလေ။
အင်္ဂုလိမာလ လက်ညှိုးတွေ ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို လူဆိုးကြီးအနေနဲ့ မြင်တာ မမှားသလို သူအရိယာ ဖြစ်သွားချိန်မှာလဲ သူ့ကို အရိယာ သူတော်စင် အနေနဲ့သာ မြင်ရမှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ လက်ညှိုးတွေ ဖြတ်နေတဲ့သူ့ကို ပြစ်တင် ဆဲရေးလိုက်ရင် ကိုယ့်ဆီမှာ နေရင်းထိုင်ရင်း အကုသိုလ် ဖြစ်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ သြော် သူကတော့ ဆရာပေါင်းမှားလို့ ခုလို လူဆိုးကြီး ဖြစ်ရလေတယ် ... ဆိုတဲ့စိတ် ထားလိုက်ရင် အကုသိုလ် မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
နောက်ပြီး ဘကျောက်ရဲ့ နှင်းဥပမာနဲ့ ပြောရရင် နှင်းကျလို့လှတယ်။ တဖက်မှာလဲ နှင်းကျလို့ ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ နှင်းကျလို့ စိတ်ပျက်တာတို့၊ ကျတဲ့ နှင်းကို စိတ်တိုတာတို့ မဖြစ်ဘဲ နှင်းကျတာဟာ သဘာဝပဲလို့ တွေးနိုင်ဖို့ကို ဆိုလိုတာပါ။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ ပြောတဲ့ အကောင်းမြင်ခြင်း ဆိုတာက ...မကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့ ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာ ငါ့နှယ် ဆိုးလိုက်တဲ့ကံ ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့မှ ကြုံရပလေတယ် လို့ စိတ်ညစ်ညူးတာမျိုး၊ ဒါဟာ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဘယ်ဝါ့ကြောင့်ပဲလို့ သူတပါးကို အပြစ်ပုံချပြီး စိတ်တို စိတ်ဆိုးတာမျိုး မဖြစ်ဘဲ ဒါဟာ အကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ပဲဆိုပြီး စိတ်ကို ဖြေနိုင်ဖို့ပါ။
ဒါဟာ ပြောရလွယ်သလောက် လုပ်နိုင်ဖို့ အင်မတန် ခက်ပါတယ်။ အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် လေ့ကျင့်ယူမှ ရနိုင်တာမျိုးလို့ နာယူမှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ယောနိသော မနသိကာရ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ နှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတာ အာရုံတခုခုနဲ့ ကြုံလာတိုင်း မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ စတဲ့ တရား လေးပါးထဲက သင့်တင့်ရာ တပါးပါးနဲ့ နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယောနိသော မနသိကာရဟာ အကုသိုလ်ကနေ ကုသိုလ် အဖြစ် ပြောင်းပေးတဲ့ converter တခုလို့ မြင်တာပါပဲ။
12/29/2010 8:44 PM
အင်း...ဒေါ်လေးမေ ပြောသလို..သောချည့်နေရတာ အကျင့်တောင်ပါလာပြီ...
မသောပြန်ရင်လဲ..စိတ်နှလုံးပူပန် ရတာကို ကိုယ့်ဖာသာပဲခံရတာ..ဒေါ်လေးမေရဲ့..
အားလုံးမှန်ကန်ပါတယ်။ အားလုံးကို ထောက်ခံပါတယ်။
ယောနိသော မနသိကာရ ဟာ အကုသိုလ်ကနေ ကုသိုလ် အဖြစ် ပြောင်းပေးတဲ့ converter တခုဆိုတာလေး ကြိုက်တယ်... တကယ်လဲ မှန်ပါတယ်...
အရာရာကို အဲဒီလို နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ တော်တော်ကြိုးစားရအုံးမယ်...း))
12/30/2010 1:24 AM
အကြောင်းရာတစ်ခုကို ရှု့ထောင့်ပေါင်းစုံက လှည့်တွေးတယ်လို့ပဲ သဘောထားပါတယ် မကောင်းမြင်တာတွေ ကောင်းတာတွေ ဆိုင်မှာမဟူတ်ပါဘူးလေ ကျနော်လည်း အဲ့လိုပဲ သူများတွေ မတွေးတဲ့နေရာက လိုက်တွေးလို့ လူ့ဂွစ ကိုဖြစ်လို့း)
12/30/2010 1:50 AM
Kyay zue bar! Your post enlightens me.
ma may khin
စိတ်လဲအေးချမ်းပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ နေရာတိုင်းကို အကောင်းမြင်နိုင်ဖို့တော့ ခက်ခဲတုန်းပါ။
နားလည်ပေးလို့ရနိင်တဲ့ အနေအထားကို နားလည်ပေးလိုက်တာ ကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာ လိုက်ရတယ်။ တတ်နိင်သမျှတော့ အဖြစ်အပျက်တိုင်း ငါသာ ကာယကံရှင်နေရာမှာ ဆိုတာမျိုး တွေးတတ်အောင်တော့ ကျင့်ထားတာပဲ။ ဒါတောင် အတ္တနဲ့ယှဉ်ရင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် နားလည်မှုက တချက်တချက် လွတ်လွတ်သွားသေးတယ်။
12/30/2010 9:35 PM
ဟုတ်ပါတယ် မမေ ..
ရှိတဲ့ ရောင်ကို ပယ် ပြီး
တရား ဘောင်ကို ဝင်မလား လို့ စိတ်ကူးမိတယ်။
ယောနိသော မနသိကာရ ဖြစ်သွားမလား မသိဘူးနော်...
1/03/2011 4:41 PM